सरस्वती पूजाको आध्यात्मिक रहस्य र श्रीपञ्चमी
५७६ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ माघ ०७ , ०३:२० बजे
सनातन हिन्दु ज्योतिष विज्ञानमा चार ओटा पञ्चमीको विशेष महत्तव रहेको छ । श्रावण शुक्ल पक्षमा पर्ने नागपञ्चमीको भदौ शुक्लमा ऋषि पञ्चमी जसलाई विरुडा पञ्चमी पनि भनिन्छ । त्यस्तै मंसिर शूक्ल पक्षमा सीतारामको विवाह भएको खुसियाली मनाइने पर्व विवाह पञ्चमी एवं माघ शुक्लपक्षको वसन्त पञ्चमी रहेको छ । वसन्त पञ्चमीलाई श्रीपञ्चमी पनि भनिन्छ, सरस्वतकिो जन्म भएको महान् पर्व भएका हुनाले यसलाई सरस्वती जयन्ति पनि भनिन्छ ।
चार ओटा नवरात्रिमध्येको सारस्वत नवरात्रिमा रुपमा माघ शुक्ल प्रतिपदा देखि नवमीसममको पर्वृलाई लिइन्छ । सृष्टिको आदिकालमा पितामहको चैतमन्थ शक्ति द्धारा मुखबाट सरस्वतीको जन्म भएको हो । त्यसैले वाणीकी देवी भनेर भनिन्छ । सरस्वतीको वर्ण गोरो हुन्छ । गौरी देह समुद्रभवा अर्र्थात गौरादेवीका रुपमा सरस्वतीलाईलिइन्छ वाग, वाणी, गी गिरा, भाषा, शारदा, वाचाधीश्वरी, वागीश्वरी, ब्राहमी, गौ, सोमलता वाग्दैवी, वाग्देवता आदि अनेक नामले सरस्वतीलाई पुकारिन्छ । सर अर्थात् मनको सरोवरबाट उत्पन्न हुने निर्गुण निराकार अत्थक्त वाणी नै सरस्वती हो । यिनी मानसरोवरबाट उत्पन्न हुन्छिन् सेतो राजहंस वाहनको प्रतीक हो । यस प्रकारको हंस मानसमा मात्र पाइन्छ ।
ऋग्वेदमा अष्टवसु, एकारुद्र, द्धादश आरित्यकी रक्षक सरस्वती सौम्यरुप मानेको छ । ब्राहनग्रन्थहरुमा वामग्देवी ब्रहनरुप हुनुका साथै कामधेनु स्वरुप मानेको छ । सत्यगुनबाट उत्पन्न भएकी हुनाले श्वेतवर्ण रहेको छ । सेतो रङ मनको पवित्रताको प्रतीक हो । दुध र पानी अर्थात् राम्रा नराम्रो छुटयाउन सक्ने बुद्धि विवेकको नाम हंस हो । जो सरस्वतीको वाहन हो । वेदको सो अहम् महावाक्य नै हंस रुप हो । प्रत्येक जीवात्मा भित्रको ईश्वरत्व नै हंस हो सो अहम, शिवो अहम्, बुद्धोअहम्, निरञ्जनो अहम आदि वाक्यले त्यही हंसमतिलाई बुझाउन खोजेको छ ।
वाणीको आकार प्रकार हुदैन । ज्ञानको साँध हुदैन । वाणीलाई कुनै लिपि, वर्ण वा आकारमा कैद गर्न सकिदैन । वर्ण त प्रतिक मात्र हुन् । मानिएका हुन् । त्यसैले त संसारमा अनेक लिपि र वर्णहरुको विकास भएको पाइन्छ । बोली मूलतः ब्रह्मरुप हो । वेदस्वरुप हो जसको कुनै रुप रङ्ग हुदैन । जसलाई उदम् इत्थ्यम् अर्थात् यो यस्तै हो भनेर तोक्न र ताक्न सकिदैन ।
जहाँ प्रवित्रता छ, सरलता छ, सहजता छ त्यही नै सरस्वतीवास हुन्छ । कमल पवित्रता प्रतिक, सरोवर तरलताको प्रतिक, पुस्तक सात्विकताको प्रतिक, लेखानी निष्कपटताको प्रतीक, हंस विवेको प्रतीक हो । वाणी एकाग्रताको प्रतीक हो भने स्फटिकमाला शुद्धताको प्रतीक हो । यी सबै ज्ञानका प्रतीका हुन् ।
सेतो रङलाई सरस्वतीको प्रर्यायरुप मानिन्छ । कुन्दपुष्प, चन्द्रमा हिउँ–तुसार, सेतो कपडा, सेतो कमल, सेतो कागजमा सरस्वतीवास हुन्छ । त्यसैले निर्मल मनबाट निस्केको निर्मल वाणी नै ब्रह्मवाणी हो । जो कहिल्यै पनि असत्य तथा अहितकारी हुन सक्दैन । सरस्वती पूजाको रहस्य सत्य, पवित्रता, सत्विमताको सम्मान हो । असत्यबाट सत्यतिर, अन्धकारबाट उजयालोतिर, मृत्युबाट अमरतातिर जानु पर्ने सन्देश दिन्छ । त्यसैले यो उत्तरायणमा पर्दछ । उत्तरायण देवताको दिन हो भने माघ देवताको विहानी हो ।
यही कारणले गर्दा माघमा मानवले मात्र होइन काग आदि पंक्षीहरुले पनि नुहाउने गर्दछन् । मकरसंक्रान्ति माघी पर्व यसको उदाहरण हो । वसन्त ऋतुको आगमनको सन्देश दिन्छ । वसन्त श्रवण अर्थात रिथरानु जस्ता परम्परागत गान हुने गर्दछ । यसैले पनि वसन्त पञ्चमीले मानव मन मष्तिष्कलाई जगाउने पर्वका रुपमा लिइन्छ । भुवोपर्व यसको निरन्तरता हो ।
बोली मानव जीवनको आधारशिला हो । वाणीको पवित्रता कै लागि वालवालिकाको अक्षराम्भ श्री पञ्चमीबाट नै हुन्छ । श्रीको अर्थ शोभा, सुन्दरता, शक्ति हुन्छ ।
श्रीभित्र रहेका शःर,ई यी तीन वर्णले शारदा, रमा, ईश्वरी आदि तीनै शक्तिलाई बुझाउछ । महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीलाई नै श्रीदृेवि भनिन्छ । संसारको उत्पत्ति, पालन र संहारको कार्य श्रीदेवीबाट नै हुन्छ । अक्षरारम्भ गर्न लागि अपुछो दिन हो । यस दिन विजोड वर्षका बालवालिका अक्षराम्भ गरिन्छ । बालकको जिबोमा सुनको कमल महमा चोपेर ऊँ ऋद्ध ऊँ सिद्धम् लेखिन्छ ।
सरस्वतीको वीजमन्त्रको एक लाख जप गर्दा जस्तो सुकै कठिन तथा अप्राप्य विद्या पनि प्राप्त हुन्छ । सरस्वती अर्थात् विद्या चाहनेले सेती लुगा लगाएर सरस्वती पूजाको दिन भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगन्माता, वागीश्वरी, कौमारी, वरदायिनी, बुद्धियात्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, भुवनेश्वरी गरी यी बाह्र नाम कमसे कम बाह्र चोटी श्रद्धा पूर्वक जप्नु पर्छ । सङ्गीत, साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, बोली, बचन, गायन, लेखन कलाको विकासका लागि श्रीपञ्चमीमा गरिएको सरस्वती साधना अत्यन्तै फलदायी हुन्छ । ‘जय मानस महतारी’।।
-आचार्य घनश्याम लेखक
लेखक कञ्चनपुर निवासी हुन् । उनी शिक्षणपेशामा संलग्न छन् । धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवक्ता समेत रहेका लेखक मानसखण्डको पौराणिकताका ज्ञाता पनि हुन् । उनका आधा दर्जन कृतिमध्ये मानसखण्ड संहिता पछिल्लो हो ।
एकै पटक निर्मला हत्याकाण्ड र लिज घोटालामा छलाङ
लिज घोटाला : अदालतद्वारा गैरकानुनी १४ लालपूर्जा बदर, यी हुन् नक्कली पूर्जाधारी !
निर्मला हत्याकाण्ड : न्यायिक प्रक्रिया नै विथोल्ने यस्तो डिजाइन !
निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीको अर्को ड्रामा : लोभले कि त्रासले ?
निर्मला हत्याकाण्ड : डिल्ली विष्ट र अंगुर जिसीका जमानतकर्ता फस्दै, यस्तो चलिरहेछ जिल्ला अदालतमा
लिज घोटाला : अर्बौको घोटाला गर्ने यी व्यक्ति बचाउने प्रयास